एमाले माओवादी पार्टी एकतापछि पदाधिकारी को-को बन्दैछन् ? | Sindhuli Saugat
एमाले माओवादी पार्टी एकतापछि पदाधिकारी को-को बन्दैछन् ?
एमाले माओवादीको पार्टी एकीकरणपछि दुई अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी नरहने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अध्यक्षकै हैसियतमा रहने बताइएको छ । दुवै अध्यक्षलाई सघाउने र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सानो सचिवालय टिम बन्ने सम्भावना छ । दुवै पार्टीका सिनियर नेताहरु समेटेर स्थायी कमिटी गठन हुनेछ । बहुपदीय अभ्यासका बारेमा एमालेभित्रै समीक्षा भइरहेको पौडेलले बताए । उनले भने-हामीले बहुपदीय अभ्यास गर्‍यौं । तर, हिजो मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव हुँदाको जस्तो अवस्था रहेन ।
बहुपदीय प्रणाली व्यवहारिक पनि नभएको र नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने देखिएपछि अध्यक्ष बाहेक अरु पदाधिकारी नरहने गरी विधान मस्यौदामा छलफल शुरु भएको छ । पार्टी एकता प्रक्रियाको शुरुवातदेखि नै सुत्रधारका रुपमा काम गरेका एमाले उपमहासचिव तथा बिधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य बिष्णु पौडेलले एकीकृत पार्टीमा पदाधिकारीहरु नरहने सम्भावना व्यक्त गरे । उनका अनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षको हैसियतमा रहनेछन् भने अरु पदाधिकारी नरहन सक्छन् ।
कार्यदलमा वर्षमान पुन र बेदुराम भुसालले प्रस्ताव गरेको अन्तरिम विधान मस्यौदामाथि दफावार छलफल शुरु भएको छ । चाँडै नै अन्तरिम विधानमा सहमति जुटाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी रहेको कार्यदलका प्रवक्ता एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले बताए । पदाधिकारी नराख्न माओवादी पक्षले औपचारिक प्रस्तावनै गरे पनि एमालेले केही बोलेको छैन ।
‘दुई अध्यक्ष, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको अवधारणाबाट छलफल अघि बढेको छ’ कार्यदलमा रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने ‘सायद अन्य पदाधिकारीहरु रहने छैनन्’ । पार्टी एकता प्रक्रियामा पौडेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट र शर्मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट शुरुदेखि नै खटिएका थिए । अहिले एमालेमा बहुपदीय प्रणाली रहे पनि माओवादीमा अध्यक्षमात्र छन् । यदि एकीकृत पार्टीमा बहुपदीय व्यवस्था नभएको खण्डमा एमालेका अहिलेका पदाधिकारीहरु स्थायी कमिटी सदस्यमात्र हुने सम्भावना छ ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय हुने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको पौडेलले बताए । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अनलाइनखबरको अन्तर्वार्ता मार्फत माओवादीको केन्द्रीय कमिटी ९९ सदस्यीय नै हुनसक्ने बताएकी थिइन् । यसको अर्थ एकीकरणका क्रममा माओवादीले ९९ वा त्यसेको हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्यको विवरण बुझाउनेछ ।
माओवादीले ९९ केन्द्रीय सदस्यको कुरा गर्नु पार्टी एकताका लागि एक स्टेप सहज भएको पौडेलले प्रतिक्रिया दिए । उनले भने-हामीले केन्द्रीय कमिटीको संख्याबारे अहिलेसम्म व्यक्तिका मन मनमा रहे पनि मुख खोलेको अवस्था छैन । माओवादीले आफ्नो ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भनेको हो भने त्यो सकारात्मक कुरा हो । त्यसैबाट छलफल गर्न सहज हुन्छ ।
पछिल्लाे - निःशुल्क मुख तथा दन्त स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
अघिल्लाे - सार्वजनिक बिदा कटौति हुँदै